Tsy mbola feno ny fepetra hanatanterahana ny fifidianana ireo komity mpanatanteraka eo anivon’ny FMF, hoy ny FIFA fa mila alamina sy vitaina hatramin’ny farany aloha ireo fifidianana any amin’ny ligin’i Vatovavy Fitovinany, Matsiatra ambony ary Bongolava. Nokianin’ny FIFA ny filohan’ny vaomieran’ny fifidianana izay sady mitantana ny fifidianana, hoy ny fanambarana no manao mpisolovava ny FMF ihany koa. Mbola ao anatin’ny fanamarihana amin’ity fanambarana ofisialin’ny FIFA ity ihany koa ny hoe tsy voarakitra mazava ao anatin’ny fitanana an-tsoratry ny fivoriambe ny 17 oktobra 2017 ireo mpikambana mandrafitra ny vaomieran’ny fifidianana sy ny fankatoavana azy ireo. Vita ireo fanitsiana sy fandaminana rehetra ireo vao azo tanterahana amin’izay ny fifidianana ny filohan’ny federasion’ny baolina kitra sy ireo mpikambana hafa mandrafitra ny komity mpanatanteraka ka ny vaomieran’ny fifidianana vaovao ary tsy maha be resaka sy ahiahy no hanatanteraka sy hanara-maso izany. Mazava ho azy fa tsy maintsy manaraka ny sata sy ny lalàm-pifidianan’ny FMF izany rehetra izany; ary mahazo milatsaka hofidiana avokoa izay kandida mahafeno ny fepetra. Manome fe-potoana hatramin’ny 3 jona ny FMF hanaovana ireo asa rehetra ireo ny FIFA. Ny 13 ka hatramin’ny 16 martsa lasa teo moa no tonga teto Madagasikara nanao fanadihadiana ny iraky ny CAF sy ny FIFA ary niresaka tamin’ireo ankolafy rehetra teo anivon’ny tontolon’ny baolina kitra Malagasy. Anisan’ireo nisaotra ny fihetsiky ny CAF sy ny FIFA tamin’ny fihainoana ny fitarainana maro samihafa moa Atoa Jacques Ramaroson, filohan’ny fikambanan’ireo ligy ho an’ny faritra Analanjirofo satria tena fanavotana ny baolina kitra Malagasy izao famoahana tondrozotra hiatrehana fifidianana lavitry ny afera manjavozavo izao, hoy izy.